काठमाडौं, २५ वैशाख । आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकरले पूरा तयारीका साथ वर्षमा एक पटक सात दिनको लकडाउन गर्नुपर्ने बताएका छन् । यसबाट प्रकृति आनन्दित हुने उनको भनाइ छ । भारतीय चलचित्र निर्माता राजकुमार हिरानीसँगको बातचितका क्रममा रविशंकरले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
रविशंकरसँग हिरानीले गरेको कुराकानीको मुख्य अंशः
हिरानीः म को हुँ, यो पृथ्वीमा किन आएँ, मेरो मुख्य उद्देश्य के हो, यी रहस्यबारे बताउनुहोस् ?
श्री श्री रविशंकरः जोसँग यो प्रश्नको जवाफ हुन्छ उसले तपाईंलाई कहिल्यै दिने छैन । जसले जवाफ दिने कोशिश गर्छ, उसले जान्दछ कि उसँग जवाफ छैन । यो यस्तो प्रश्न हो कि जसले तपाईंको बुद्धिको परिपक्वतालाई बताउँछ । यसकारण पटक-पटक यो प्रश्न आफैंसँग गर्दै गर्नुस् । यसबाट स्पष्टता आउनेछ र जीवनको मकसद मिल्नेछ । तपाईं जे काम गर्नुहुन्छ यसले तपाईं को हो भनेर बताउँदैन । यसबारे तपाईं अन्तरमनबाट नै जान्न सक्नुहुन्छ । जब तपाईं यो प्रश्नको जवाफ प्राप्त गर्नुहुन्छ तब बाँकी महत्वहीन हुनेछ र तपाईंको मुहारमा मुस्कान खतम हुनेछैन ।
हिरानीः विश्वास र तर्कमध्ये कुन रोज्नुपर्छ ? जसले विश्वास गर्छ उसँग सन्तुष्टी हुनेछ, जो तर्कको खोजी गर्छ ऊ त्यहीँ फस्नेछ ?
श्री श्री रविशंकरः याद राख्नुहोला तर्क हमेशा ज्ञानको दायरामा रहन्छ । जति तपाईं जान्नुहुन्छ त्यति मात्रै तर्क गर्न सक्नुहुन्छ । ज्ञान सीमित छ । यसकारण तर्क पनि सीमित हुन्छ । त्यसकारण केही जान्नुहोस्, केही मान्नुहोस् ।
हिरानीः आजकल हामी सबैमा मोबाइल फोनको लत छ । यो लागूपदार्थको कूलतजस्तै छ । यसबाट कसरी छुटकारा पाउन सकिन्छ ?
श्री श्री रविशंकरः मोबाइल फोनको प्रयोग विवेकसम्मत हिसाबले गर्नुहोस् । सुत्ने समयमा मोबाइल बन्द गर्नुहोस् । उठेपछि पनि एक घण्टापछि मात्रै मोबाइल खोल्नुहोस् । महिलाहरुसँग म आग्रह गर्दछु कि खाना खाने बेलामा सबैसँगबाट मोबाइल खोसिदिनुहोस् ।
हिरानीः लकडाउनमा आकाश ज्यादा निलो देखिएको छ । यस्तो लाग्छ कि मानिसहरु स्वस्थ भएर निस्कनेछन् । डर छ कि स्थिति नबिग्रियोस् ?
श्री श्री रविशंकरः म त भन्छु हामीले हरेक वर्ष सात दिनको लागि लकडाउन गर्नुपर्छ तर पूरा तयारीका साथ ता कि मानिसहरुले अत्यावश्यक सामग्री पहिले नै जुटाएर राखुन् । यसबाट प्रकृतिले आफूलाई आनन्दित गर्न सक्नेछ ।
श्री श्री रविशंकरclose